I-aluminium yedayimani yokunyathela iphepha leFektri - China iAluminiyam yedayimani yenyathela iphepha labavelisi, abaxhasi
I-Bright 1100 1050 3003 i-Aluminium e-Checkered Plate 3 Ibha ye-5 ye-Mirror i-Aluminium Sheet
Umphezulu ukrolwe ngepateni enye, ngokusebenza kakuhle kokusebenza, ukuqina okuphezulu, ukumelana nokubola, kunye ne-oxidation egqwesileyo kunye nezinye iziphumo zonyango. Inezinto eziluncedo yokusebenza egqwesileyo, ipateni ecacileyo kunye nomphezulu ococekileyo. Isetyenziswa ngokubanzi kwizixhobo nakwimveliso yoomatshini, izakhiwo ze-welding kunye namasimi afuna amandla athile.
Ingxubevange: 1050 1060 1100 3003, 3105, 5052, 5005, 5754 5083 5182, 5086, 6061 6063 6082, 7075, 8011…
Umphezulu: Mill / Emboss / Diamond / 2bar / 3bars / Bright
Ubude: 1000mm ukuya 10000mm
Ngokomgaqo owahlukileyo wokwahlulahlula, zininzi iintlobo zealuminium eziqhelekileyo.
Okokuqala, ii-alloys eziqhelekileyo ze-aluminium zahlulwe zangamacandelo e-8 e-aluminium alloy ngokungqinelana nokwenziwa kweekhemikhali ezahlukeneyo;
I-5052 6061 6063 7075 i-Aluminium ye-Aluminium Plate ye-0.8-300mm Ukutyeba kweDikki leSikhephe
Ipleyiti yeadayimani yeAluminiyam inceda ukunciphisa umngcipheko wokutyibilika ukwenza ukusetyenziswa okugqwesileyo kuseto lweshishini njengezinyuko, iirampu kunye neendlela zokuhamba.
Aluminium enyathela iphepha lokunyathela, IAluminiyam inyathela ipleyiti eBritish, Abenzi beAluminiyam yokujonga ipleyiti,Abavelisi bephepha ledayimani, Abavelisi beepleyiti zokunyathela iAluminiyam, umzi mveliso wefayile yeAluminiyam, intsimbi yealuminium
Iipaneli zeAluminiyam zangaphandle
Uhlobo lweepaneli zodonga lwealuminium zahlukile kwaye zinokwahlulwa ikakhulu ngaphakathi kwiipaneli zodonga lwealuminium kunye neepaneli zangaphandle zealuminium. Iipaneli zetsimbi ze-aluminium zinembonakalo entle, kwaye zinokuba nayo nemisebenzi yokuthintela umlilo, ukukhusela umbane, ukugcinwa kobushushu, ukufakwa kwesandi, ukungena komoya, ukwenza umthunzi njalo njalo.